Nagu saabsan - Dongguan City Baby Furniture Co., Ltd.
Dongguan City Baby Furniture Co., Ltd. waxaa laga aasaasay Dongguan sanadkii 2007, iyada oo ku xigta Dongguan City BaoFa Furniture Co., Ltd. iyo Dongguan Pinweitongju Furniture Co., Ltd. waa shirkado la xidhiidha isla maamul isku mid ah. Kooxdayada shirkadaha waxay ku takhasustay soo saarida iyo soo saarida alaabta caruurta ee dahaadhka leh iyo alaabta guryaha lagu kariyo, sida Kids Sofas, Kuraasta Caruurta, Sariiraha Caruurta, Ottomans, Dugsiyada Xannaanada Caruurta ee loo yaqaan 'Preschool Section Sofa Sets', Sariirta Carruurta iyo Sariiraha Xannaanada Carruurta ...
Waxaan dhisnay laba xarumood oo wax soo saar casri ah oo leh 20000 sqm, oo ay weheliyaan koox aad u fiican oo R & D ah iyo in ka badan 300 shaqaale xirfad leh oo ku sugan Dongguan, Shiinaha.
Waxaan diyaarinay waaxda tayada sida ku xusan ISO9001: 2015, oo ka kooban hubinta tayada, hanti dhowrka tayada, QE, IQC, IPQC, FQC iyo OQC. Shahaadada hantidhawrka warshad ayaa loo heli karaa: SMETA, ICTI, WCA, GSV, SQP… iwm. Gaar ahaan, waxaan nahay warshaddii ugu horreysay ee bixisay liisanka soo saarista Disney ee carruurta ee alaabada la sudhay iyo OEM ee sumaddan weyn muddo ka badan 9 sano illaa hadda. waxaan sidoo kale ku faaneynaa inaan nahay shirkadleyda shirkadaha TJX, Melissa & Doug, Aldi, Dunelm, Jollyroom ... ect. Dhanka kale shirkadeenu waxay dhaaftay Hantidhawrka Walmart waxayna siisay aqoonsi alaab-qeybiyaha Walmart.
Waxaan ku siineynaa OEM & ODM & Adeeg gaar ah, oo bilaash ah oo leh "KOOPO" "KOPOO KING" "BABYLAND" oo loogu talagalay suuqa gudaha iyo dibedda. Moodooyinka oo dhami waxay waafaqayaan shahaadooyinka TSCA, EN71, ASTM, FSC, CPSIA ... ECT.
Shirkadeenu waxay u heellan tahay inay soosaarto alaabooyinka cusub fikradda naqshadeynta ugu dambeysa iyo tikniyoolajiyadda hal-abuurka leh, waxay ku dadaalaysaa inay dadka u soo bandhigto wax soo saar wanaagsan oo qiimo jaban leh, u keento Carruurta iyo Xayawaanada hab nololeed koritaan caafimaad leh, oo aad ugu faraxsan gurigaaga.
Ku soo dhowow inaad soo booqato warshaddeenna ama aad na soo wacdid wakhti kasta!